Wararka - Beijing waxay Qorshaynaysaa in ay hesho 1,000 guri oo lagu qiimeeyo xiddigaha shan sano gudahood
Bishii Juun 16 -keedii, Beijing waxay qabatay shirar jaraa’id oo taxane ah si loogu dabaaldego sannad -guuradii 100 -aad ee ka soo wareegtay aasaaskii Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha, “Beijing Si Wada -jir ah Kor Ugu Qaad”. Kulanka, Kang Sen, ku -xigeenka xoghayaha guddiga beeraha iyo shaqada ee dawladda hoose ee Beijing, agaasime ku xigeenka xafiiska beeraha iyo arrimaha reer miyiga ee dawladda hoose, iyo afhayeenka, ayaa soo bandhigay in xagga warshadaha miyiga, Beijing ay xoogga saari doonto guryaha dalka iyo qorsheynta si loo qiimeeyo 1,000 hoteel oo xiddigaha lagu qiimeeyo shan sano gudahood sidaas darteedna in ka badan 5,800 guryo dhaqameedyo ayaa la beddeli karaa oo la hagaajin karaa si loo hagaajiyo heerka adeegga casriga ah ee dalxiiska miyiga.
Kangsen wuxuu soo bandhigay in sanadihii ugu dambeeyay, warshadaha miyiga ee Beijing ay noqdeen kuwo kala duwan. Beijing waxay hirgelisay dalxiiska beeraha firaaqada ah, iyadoo diiradda saareysa abuurista in ka badan 10 waddooyin oo tayo sare leh, in ka badan 100 tuulo oo firaaqo ah oo qurux badan, in ka badan 1,000 jardiinooyin beeraha firaaqada ah, iyo ku dhawaad ​​10,000 qaatayaal caado u leh dadka. Intii lagu guda jiray fasaxii “Dragon Boat Festival”, Beijing waxay heshay wadar ahaan 1.846 milyan oo dalxiisayaal ah oo dalxiis u tagay miyiga, koror sanad-dhaaf ah oo ah 12.9 jeer oo soo kabsaday 89.3% isla muddadaa isla sanadka 2019; Dakhliga hawlgalka wuxuu ahaa 251.36 milyan yuan, koror sannad-sannadeedka oo ahaa 13.9 jeer, iyo koror sannad-sannadeedka ahaa 14.2%.
Marka la eego hagaajinta deegaanka nolosha miyiga, Beijing waxay hirgelisay mashruuca “Boqol Banaanbaxa Tuulada iyo Hal Kun oo Dayactir Tuulo” ah, kaas oo dhammaystiray hawshii dib -u -habaynta deegaanka nolosha 3254 tuulo, waxayna horumar muhiim ah ka samaysay dhismaha tuulooyinka quruxda badan: heerka caymiska musqulaha qoyska ee aan nadaafadda lahayn ayaa gaaray 99.34%; tirada tuulooyinka ay dabooleen tas -hiilaadka wasakhda bulaacaduhu waxay kor u kacday 1,806; wadar ahaan 1,500 tuulo oo lagu kala saarayo qashinka iyo 1,000 tuulo oo cagaar ah ayaa la abuuray. 3386 tuulo iyo qiyaastii 1.3 milyan oo qoys oo ku nool Beijing ayaa kuleyl nadiif ah gaaray, taas oo kaalin wanaagsan ka geysatay ku guuleysiga dagaalka lagu difaacayo cirka buluugga ah.
Waqtiga dhejinta: Jun-21-2021
Hore: Sida Loo Doorto Kettle Electric?